सरकारले जनतालाई कर को बोझ थपेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष राणाको आरोप
पुरन साह/धनुषा । जनतालाई करको बोझ थपेकोले सरकारको भविश्यमा असर पार्ने प्रजातान्त्रिकका चेतावनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शम्सेर राणाले संघीयताको आडमा नेपाली जनताको नाप्लोमा थेग्नै नसक्ने करको बोझ थपेको भन्दै यसले सरकारको भविश्य माथि नै असर पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ । जनकपुरधाममा दुई नंवर प्रदेशका सवै जिल्लाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको भेलामा अध्यक्ष […]
दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि ७० थान ट्राफिक सांकेतिक बोर्ड हस्तान्तरण
जितलालर श्रेष्ठ/ बारा । राजमार्ग क्षेत्रमा दुर्घटना बढ्दै गएपछि जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघ बाराले प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयालाई ७० थान ट्राफिक सांकेतिक बोर्ड हस्तान्तरण गरेको छ । सुरक्षित यात्राका लागि चालक, यात्रु तथा पैदल यात्रुलाई सडक र ट्राफिक नियम सम्बन्धि सचेतना जागृत गराउनका नगर उद्योग वाणिज्य संघले ट्राफिक सांकेतिक बोर्ड हस्तान्त्रण गरेको […]
काठमाडौं – दुई महिनायता मलेसियाबाट नेपाल आउने हिमालयन र नेपाल एयरलाइन्सका जहाज यात्रुले भरिभराउ छन् । नेपालबाट मलेसिया उडदा भने अधिकांश सिट खाली हुन्छन् । जेठ २ देखि नेपाल सरकारले मलेसिया जान चाहने नयाँ कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ । बिदामा फर्केका पुराना कामदारले पुनः श्रमस्वीकृति पाइरहेका छन् । नेपाली श्रमिकको सबभन्दा ठूलो […]
सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशन सुखद परिणामसहित अन्त्य भएको छ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधार तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वायत्तताका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत् डा. केसीको यो सफलतालाई उहाँको व्यक्तिगत जित र सरकारको हारको रुपमा भने लिनुहुँदैन । बिहीबार राति डा. केसीले सरकारसँग गरेको सम्झौता नेपाली जनता र सरकार दुवैको जित हो […]
आफनै काका बाट ७ वर्षिया भतिजिको बलात्कार, १३ वर्षिय युवतीको बलात्कारपछि हत्या
एम के/सप्तरी, चन्द्रकान्त/कञ्चनपुर । सप्तरीको कंचनरुप नगरपालिकामा काकाले ७ वर्षिया भतीजीलाई एक महिना देखी बलात्कार गरिरहेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । पटक पटकको बलात्कार पछि सिकिस्त विरामी परेकी पीडीत बालिकालाई अस्पताल भर्ना गराईएपछि बलात्कार भएको खुलासा भएको हो । पिडित बालिकाको बयान र आमाबुवाले छोरीलाई रेखदेख गर्न जिम्मा दिएका आफनै काका २५ वर्षिय गजेन्द्र साह […]